सरकारको उदासिनताले बेइजिङमै थन्कियो अनुदानको खोप !! | सुदुरपश्चिम खबर
सरकारको उदासिनताले बेइजिङमै थन्कियो अनुदानको खोप !!
तर आपत्कालीन रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भ्याक्सिन हालसम्म आउन सकेको छैन । ‘हाम्रो सूचनाअनुसार नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने भ्याक्सिन बेइजिङको स्टोरमा छ । अब त्यो भ्याक्सिन ल्याउने काम नेपालको हो,’ चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपालका लागि फेब्रुअरीको अन्त्य ९फागुन १५० तिर नै खोप छुट्याइएको थियो । ‘तर नेपालले हालसम्म उक्त खोप ल्याउन कुनै पनि जहाज पठाएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।